***…မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့…နက်ဖြန်…*** | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » ***…မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့…နက်ဖြန်…***	12
Posted by maung khinmin on Jun 28, 2012 in Creative Writing, Poetry | 12 comments
ပန်းရိုင်းတို့ မြေ….ဖူးပွင်းဝေဖို့ 
မှိုင်း ခေတ်မှသည်…ယနေ့ ထိအောင်
မယိုင် စိတ်ဓါတ်..လွတ်လပ်ငှက် တွေ
ကောင်းကင် ထက်၌…ဖျတ်ဖျတ် တောင်ပံ
အမှန် ဆီသို့ ……………..
တစ်ရံ ရောခါ…နာနေ ရင်ထဲ
မေ့ခက်ခဲ စွာ…နေ့ ရက်စွဲ ကြာ
အနာ ဖေးတတ်…မဝေးတော့ ပါ
သာယာ တစ်နေ့ …အာဏာ ဓလေ့
မမွေ့ ကမ္ဘာ….တစ်နေ့ ကွယ်ပျောက်
မြန်မာ ပြည်လည်း…ချမ်းမြေ့ ပါစေ
တောင်းဆု ခြွေမြဲ…မုန်တိုင်း စဲလျင်
မကြာ ခင်တော့…ကြည်လင် ကောင်းကင်
တိမ်ကင်း စင်လို့ …နေခြည် လွင်လွင်
mamanoyar says: အားပေးသွားပါတယ်ရှင်
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: နက်ဖြန်ဆိုတာ ရှိနေမှတော့…
နက်ဖြန်တိုင်း ရဲ့ နေ့သစ်တွေမှာ……
အောင်မြင်ခြင်း ရဲ့ မြို့တော်ဆီ…..
မိုက်လေး ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ….
maung khinmin says: လိုရာခရီးကို….
သားဦး၊မြေးဦး says: ဓါးတောင်ကိုကျော်၍ မီးပင်လယ်ကို ဖြတ်မည့် ရဲဘော် သံချောင်းပါခင်ညာ့။
maung khinmin says: သံချောင်းနဲံ့….ပင်လယ်ခရီးကိုဖြတ်ရင်တော့….
အလင်းဆက် says: လေးစားထိုက်တဲ့ ကဗျာ.တစ်ပုဒ်ပါ..။
ကျွန်တော်လည်း…အဲဒီလို ကဗျာ မျိုး.ရေးတတ်ချင်မိတယ်..။
maung khinmin says: ဆြာအလင်းဆက်က….
မမ အညာသူ says: ကဗျာကိုလှလှပပမရေးတက်ပေမဲ့
maung khinmin says: မမညာရယ်..ကျုပ်ကိုရင်ခုန်အောင်တော့…
မောင်ပေ says: ကျုပ်ကတော့ ဆြာခင့်ရဲ့ ကဗျာတွေ နေ့ တိုင်းဖတ်ရဖို့ မျှော်လင့်နေတယ်ဗျို့ 
မဂွတ် ထော် says: ကောင်းကင် ထက်၌…ဖျတ်ဖျတ် တောင်ပံ
Aythan says: “မြန်မာ ပြည်လည်း…ချမ်းမြေ့ ပါစေ” ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးမှာ ဒီစာသားကို သဘောကျတယ်
Comments By Postသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - Munetez - Ei Kyipyar``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Munetezအိပ်မက်မင်းသမီး - Myo Thant - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - Munetez - ကြောင်ဝတုတ်အထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Ma Eiသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Munetezတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ဦးကြောင်ကြီးဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - kyeemite - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ei - ဆူးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - ကြောင်ဝတုတ် - အလင်း ဆက်အဟံ ပထမံ - ကြောင်ဝတုတ် - padonmarမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - ကြောင်ဝတုတ် - black chawလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - Mobile13 - padonmarဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews - Kaung Kin Pyar - အလင်း ဆက်နောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Ei Kyipyar - ko pauk mandalayရထား ထွက်တော့ မယ် - Moe Z - padonmarသို့ ချစ်သောဖေဖေ - Myo Thant - အလင်း ဆက်အမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - ရွှေတိုက်စိုး - padauk moeရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - padonmar - Traditional MedicineCongress - ကထူးဆန်း - Traditional Medicineဆက်သွယ်မှု ဧရိယာပြင်ပမှာ - Aung Myat Lin - kyeemiteဦးဖိုးလူနှင့် ပထမဆုံးများ - Mobile13 - မောင် ပေEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77886 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67257 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66736 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (58874 Kyats )MaMa (57821 Kyats )Top Posts & Pagesဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews